Hamro Nepal Sports - Connect Broadly with Nepali Sports
आइपिएल २०२२: पहिलो प्लेअफमा आज गुजरात र राजस्थान प्रतिस्पर्धा गर्दै
हैदराबाद विरुद्ध बैंगलोरको लज्जास्पद ब्याटिंग
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 8, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमान्डौ । नेपालले आज बेलुकी ९:४५ बजे जोर्डनको सामना गर्ने छ। नेपालले आफ्नो समूहका ६ वटा खेल खेलिसकेको छ र अब दुइ खेल खेल्न बाकी रहेको छ। ६ खेल मध्ये दुइ खेलमा चाइनिज ताइपाइलाइ पराजित गरेको नेपालले ४ वटा खेलमा निराशाजनक हार बेहोरेको थियो। नेपालले अबको दुइ खेलमा, जुन ७ […]
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 6, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौ पहिलो राउन्ड : ३५-४६ बरियतामा भएका १२ टोलिहरुले होम अवये फर्म्याटमा खेल खेले र, उक्त मध्ये ६ टोलिहरुले दोस्रो राउन्ड प्रस्थान गरे । दोस्रो राउन्ड : पहिलो राउन्डबाट ६ टोलि र १-३४ स्थानमा भएका ३४ टोलि गरेर ४० टोलिहरुको ग्रुप बनाइयो। प्रत्येक पाच टोलि सम्मिलित ८ […]
खेल्छ त नेपालले एसिया कप ? यस्तो छ समिकरण !! ( नया अंक तालिका सहित )
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 4, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमान्डौ। फिफा विश्वकप २०२२ छनोट अन्तर्गत अहिले नेपाल कुवेतमा रहेको छ । दोस्रो राउण्डमा नेपालले पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेइलाइ २-० को गोलानातरले पराजित गर्यो। नेपालले यस राउण्ड अन्तर्गत अब जोर्डान र अस्ट्रेलियाको सामना गर्ने छ। नेपालको विश्वकपमा छनोट हुने आशा सकिए पनि एसियन कपमा खेल्ने अवसर भने […]